Bhaibheri, kopi kana kupfuurira kwezvinyorwa zveSumerian? - AFRIKHEPRI
Miti inogovera chikafu pakati pavo nemidzi
Du Latin apocalypsis (zvakazarurwa), iyo pachayo yakakweretwa kubva kune yekare chiGiriki apokalupsis (yakawanikwa), ichibva kwechiGiriki chechirevo kalupto (kuviga) inotungamirwa ne prefix yekunyimwa apo. Chaizvoizvo "chisina kuvanzika", uye nekudaro nekuwedzeredzwa, "kuvezwa pameso", "kubviswa kwechidzitiro", "chifukidziro chinosimudzwa".
Sezvo shanduro ivhu mahwendefa Mesopotamia uye kudzidza zvinyorwa zvebhaibheri, zvinonzi kuratidzwa kuti Zvikamu wandei Yekare zvinoratidzwa mahwendefa akanyorwa ecuneiform. Sezvo zvebhaibheri mafashamo iyo modeled pamusoro vomuBhabhironi shanduro mafashamu inowanikwa muraibhurari mambo weAsiriya naAshurbhanipari kuNinivhi rakashandurwa uye rakabudiswa Smith Goerges, kana huri Epic pakati Gilgameš (Babylonian Shanduro yomusi namasere kana nemanomwe remakore BC.), zvisikwa (Enuma Elish yakakura), pakasikwa vanhu kubva nevhu, chakavanzika kusafa ...
Kopi yechipfupa cheSumerian, chine 2500 av. JC
Izvi zviri mukuenderera mberi kwekuti mahwendefa eSumer acharatidzwa nekupa maonero matsva muzvitsauko zvekutanga zveGenesisi. Pakave nekuedza kwakawanda kushanduriro, asi zvakakosha kupfuura zvose zvakange zviri muongorori mu sclerology, Anton Parks. Mubhuku rake rinonzi WEEDHENI (2011, Ref New Earth), apo kuvimba basa vamutangira ayo (Samuel Noah Kramer, Jean Bottero, Georges Contenau, ...), rinopa shanduro uye anoisa kuenzanisa chati pamwe izvo zvatinowana muJerusarema Bible.
Mahwendefa eAnototed CBS 14005, CBS 8383 yakanyorwa kumadzimambo ekutanga eSumer, kunyanya kusvika kuC2800 makore BC. J. - C. naBom 74329 vanobudiswa mubhuku iri muBhabhironi panguva yekutapwa kweVaHebheru, kunyanya kusvika ku597 BC. Ndiyo nzvimbo yeBritish Museum.
CBS 14005, iri mberi, mutsara 21: "Enlil uye vamwari akabudisa vanhu...vakanga vasina kupfeka: hapana nguo dzakanga dzakarongwa kwavari "
Gn 2: 25: " murume nemukadzi zvakasikwa Mwari finden Sie nus »
CBS 14005, chikamu b, mutsara 24: "Isu, the vamwariisu takashandura, tine vachibata... uye akati akamira mu ivhu »
Gn 2: 7: " Mwari akafananidza murume ane ivhu ivhu uye munhu akava munhu mupenyu »
CBS 14005, chikamu b, mutsara 21: " Herds kubva pachivanze ...murume vatorwa ainzi uye akazviverenga zvakanyanya "
Gn 2: 20: " murume anopa mazita munhu wose mombe, shiri dzekudenga nemhuka dzose dzesango "
CBS 14005, rutivi b, mutsara 29: "Vaiva deux. Munzvimbo ipi neipi, murume akaita ruzha. ake mukadzi akaita basa rake rakakwirira picking rations. Nhamo, iye akaenda naye »
Gn 2: 25 uye 3: 6: " murume and the mukadzi finden Sie deux. Mukadzi wacho anofamba nemurume ari mubindu. Mukadzi ari kuenda nonga chibereko chinorambidzwa "... (EDEN, p.143)
CBS 8383-a, chinyorwa 2: "Panguva iyoyo, murume uyu haana kubereka chero chinhu ".
Gn 2: 5: "... hapana akanga asina munhu wokurima pasi "(EDEN, p.110)
BM 74329: " 7 zvizvarwa de vanamwari, 7 zvisikwa zvisikwa pamberi pokuuya kwamwari An (u) uye iyo Anunna »
Gn 1: 1 ku2: 3: "the 7 mazuva ekusikwa of Elohim kusati kwasvika YHW bv nira ngirozi (EDEN, 65)
Icho chinangwa pano hachisi kuisa kufanana kwose asi kungojekesa chokwadi chokuti makumi emakumi emakore asati atanga kunyora kweTesitamende Yekare uye Testamende Itsva, nhau yakafanana yakafanana neyeGenesisi yakanga yatovapo uye yakatonyorwa zvakare pamahwendefa evhu. Vamwe vangati kuti izvi hazvishamisi kubva shoko raMwari akawanda ari kuratidzwa kwayo uye nokudaro tinogona pano kutanga chii aizova Bhaibheri gare gare. Saka izvo chaizvoizvo "Mwari" achida kuisa ruzivo ruzivo rwebhaibheri kuti ruparidzire nyore nyore rungadai rwakasarudza kuburikidza nevarume "vakafuridzirwa" kuti vatumidze shoko rake zvakare nenzira yakadzivirirwa. Kune avo, tinogona kupindura, hongu sei tisingaiti.
Zvinosuruvarisa, kuenzanisa hakusi nyore, zvirokwazvo, avo vakanyatsoteerera vakawana kuti apo Bhaibheri rinotaura nezve "Mwari", vaSumerian vanotaura kune vamwari, sezvazviri chiitiko kupa zvinouya kare sevakaiswa chiratidzo pamwe chisimbiso nokusaziva, mumwe vangagumisa kuti sevaSumer vakanga vakarara rondedzero naMwari. Asi uku ndiko kwakanaka muzvizhinji nhamba regai chifungidziro zvachose, muchiHebheru shanduro yekare.
Pane 14 huru kuverengwa Bible French, 12 vakabvuma kushandiswa rokuti "Mwari," nepo vamwe 2 (shanduro kubudikidza Dhorme uye Chouraqui) kuti rakashandiswa echiHebheru "Elohim" zita. Asi Mwari haasi Mwari 3 zvikonzero.
1 - Shoko rokuti "Mwari" rinobva kuLatini Deus, iro pacharo rinobva kuIndo-European root dei "kupenya" raishandiswa kuratidza chiedza chakadenga, zuva. Tsanangudzo yaro tsvene inongowanikwa chete kana inosanganiswa neumwari wechiGiriki Zeus achizivisa ZE-OUS uye ane maitiro eDios. Ichaonekwa mumutauro wechiFrench muzana remakore rechigumi nemapfumbamwe. Saka iye ari bastard pachikoro chemiidzo.
2 - Elohim chizhinji, zvechokwadi muchiHebheru chidimbu "im" chizhinji. Elohim ndeyezvizhinji zveEloha iyo iri nyore neE EL.
Chii chinonzi Larousse Dictionary (shanduro ye1965) inotiudza: "Elohim, Hebrew (...) yakawanda yeEri kana Eloha ..." Uye Larousse Online Dictionary 2012:
"Elohim: Zvizhinji zve Eloha, zvinoreva kuti 'Mwari'".
Ichazoonekwa kuti zvinyorwa zvinyorwa zvezwi raMwari mune tsanangudzo yechipiri. Imwe nzira yekureva, kutora nemafuta.
3 - Sezvo inobvumirwa kuti yaiva muchiHebheru kuti chikamu chakaenderana cheTesitamende yekare cheBhaibheri chakanyorwa. Zvakakosha kufunga nezvemimwe mitemo, zvechokwadi yekushandura kubva muchiHebheru, haisi yekushandura kubva kuChirungu, kunyangwe kana iri pamusoro pemagwaro matsvene anotsanangurwa naMwari pachake. ITanakh iyo inotsanangura Bhaibheri rechiHebheru ndiyo yakagadziriswa, iyo inofanirwa nemitemo yeGematria inopa shoko rimwe nerimwe basa rekiyi yekugadzirisa aritmetic equation.
Chii chinonzi gematria?
Uyu murairo unobatanidza nhamba yepamusoro netsamba, kuitira kuti muchiHebheru chikosha chechimiro chezwi baba baba 3 uye icho chemamai shoko rokuti 41, chiyero 44 chinokwana nekukosha kweshoko mwanakomana.
Nokudaro kushandura shoko rokuti Elohim iro rakawanda nezwi rimwe chete iro risinawo unyanzvi eymological neyekupedzisira apo munhu anoziva gematria, ndeyekuunza pfungwa pamusoro penhau inonzi ichitsvene zvakadaro.
Izvo zvinofanira kuzivikanwa kuti muSumerian, ADAM inoreva "Mhuka, mhuka", EDEN, "Kudzoka kwegomo", rinoreva nzvimbo iyo ADAMU yaifanira kushanda nayo vamwari veSumerian.
Gn 2: 15 "Uye Jehovha Mwari akatora murume ndokumuisa mumunda weEdheni kuti amuchengete uye amuchengetedze" (New World)
MuBhaibheri munhu anotorwawo kuti ashande mubindu reEdheni, chaizvoizvo aripo chete nokuti hapana munhu aifanira kusimbisa pasi sezvinotaurwa ndima iyi:
Gn 2: 5 "... Jehovha Mwari akanga asina kunaya panyika uye kwakanga kusina varume kuti varime ivhu" (Nyika Itsva)
Cherechedza kuti muchiHebheru cheEdheni zvinoreva Garden, zvinonyanya kushandura zita rechiHebheru rokuti Eden neBindu reEdheni.
Kana munhu anotarira Mabviro ezwi rokuti paradhiso rinobva muchiLatin paradisus, kubva muchiGiriki paradeisos aireva apo chikwereti chake kubva pardez Persian "ane akanyudzwa paki umo mhuka dziri," uye kuti pane wedzera kuti shanduro mamwe mashoko eBhaibheri vakawana ungira muna Sumerian zvinosanganisira pamasikiro WEEDHENI Sumerian.
GÀN EDEN "Munda uri kumashure kwegomo", zvinofadza kuziva kuti muchiHebheru GAN EDEN rinoreva "munda wekunakidza".
Imwe chokwadi chinoparadza uye kwete zvishoma Bhaibheri rinotitaurira, kuburikidza naGn 1: 27 "Uye Mwari akatanga kusika munhu nomufananidzo wake, mumufananidzo waMwari akamusika: akavasika murume nomukadzi" ( Nyika Itsva), iyo murume nemukadzi vakange vatovapo kare Gn 2: 7. Apo Adhamu achitaurirwa kwatiri kubva pane zvinotaurwa neBhaibheri semunhu wekutanga, Sumer zvakare anomutsa chidzitiro:
BM 74329: "Zvizvarwa zve7 zvezvimwari, 7 zvisikwa zvisati zvauya kusvika kwamwari An (u) uye Anunna wake"
Sezvo shanduro yepahwendefa inoratidza, mazuva e-7 yebhaibheri pakati peSumerian anofananidzwa nekutsvaga kwezvizvarwa, uye panguva imwe neimwe yakatenderera, chimwe chinhu chakawedzerwa kune zvakasikwa. Kune vaSumerian, ndiAn kuburikidza nomwanakomana wake Enlil uyo akasika EDEN, asi kwete varume vokutanga vakanga vatotanga kupararira nyika paaisvika. Zvinonakidza kuziva kuti muShanduro yeNyika Itsva zita raJehovha rinowanikwa kwekutanga kokutanga kwezuva 7th. Kungoitika kwevashanduri?
Chero zvakadaro, kupa zvikamu zvinoratidzwa, bhaibheri mubhuku raGenesi rinotora kunhuwa kwekunzwa (zvakare), uyewo mazano akanaka kwazvo anokwanisa kupa kwatiri Bhaibheri nechinzvimbo chezwi rokuti Elohim, muzhinji, rimwe zita rinomiririra Mwari risingatauri kune chimiro chakafanana.
Chikumbaridzo chepiramidi mukuyeuka Charles T. Russell, muvambi weWatchTower Bible uye Tract Society (Zvapupu zvaJehovha). Iine zviratidzo zvehumwe humwe hweMasonic Rite yeYork, ikozvino inonzi Rite Standard Webb, inoshandiswa zvikurukuru neNorth American masonry nguva dzose. Zvose zviratidzo zviripo zvakadaro zvakarambidzwa nemutemo neWatchTower.
Sei vanhu vakawanda vasina kumbonzwa izvi apo zvinyorwa zvePeterian mapiritsi zvave zvichizivikanwa kwechinguvana zvino?
Nokuti pakutanga, vashoma kwazvo vaKristu vakatora dambudziko kuti vatarise magwaro ezvinyorwa zveBhaibheri ravo. Kutenda kunobva pane chiito chekutenda chiri munzira inopesana nekufunga kwakanyanya uye kubvunzurudza, hazvishamisi pachako, zvakakanganisika kubvunza chikamu che Bhaibheri uye kugamuchira zvese kubvira apo Bhaibheri rose rinoratidzwa sechibvumirano ichiendesa shoko raMwari. Kana tikabvuma kuti rimwe chete rune nhema, tinopokana nezvose zvebasa racho. Uyewo pano kuti zvainoitawo matavi matsva echiKristu yakabuda Century 19e (Mormon, Zvapupu zvaJehovha, etc ...), vanozivisa nomumwe sezvo yokuudza mubhaibheri shoko rechokwadi uye kutanga mushanduro yavo yeBhaibheri uye kudzidzisa kuburikidza neBhaibheri iri idzva. Zvechokwadi, nhengo dzinofanira kuwana kubatana sezvo Bhaibheri riri munhu oga, zviri nyore kuzvifananidza pamberi pemitezo kuti ive yakarurama uye vamwe vakanganisa ...
Zvinofanira kuonekwa kuti matongo makuru ekutsvakurudza matongo anobhadharwa nevashambadzi vakuru vechiKristu vasingatsvaki kubvuma kwechokwadi kwebasa ravo, nokudaro vachiisa dambudziko kuvatsvakurudzi vanoda rubatsiro. kuti vafambe munzira iyo yakatemerwa kwavari, i "chiKristu" kwazvo, ichi chinodiwa chekutonga kwemashoko uye ruzivo, uye nekuda kwezvakaipesana nezvimwe zvinhu zvinobudiswa, tinonzwisisa nei. Zvechokwadi, izvi ndezvokuti kutsvakurudza kunoshanda nguva dzose, vashandi vanonyaradza avo vanopesana nemaonero avo uye vanopa rusununguko kuna avo vanotsigira maonero avo, maererano nehuwandu huwandu hwekupedzisira ndeweye nyika. Farao weIjipiti.
Zvechokwadi, sezvo rokutanga Napoleonic nzendo (1798) uye kudzidza zvenyu echiGiriki vomuzuva, anonzi vapfumi Pharaonic Egipita kusvikira Ptolemaic youmambo yakanga raizouya Negro African, asi Panguva ino yatiri kuenderera mberi tichiona kumira kwaFarao kana mamwe maitiro anonzi Pre-Ptolemic anomiririrwa nemamwe maSemu. Zviri nyore kuzviisa iwe mumamiriro ezvinhu panguva iyo kuti unzwisise migumisiro yechokwadi chakadaro. Fungidzira Napoleon nevamwe vake vashandi vachiona kuti nhangemutange yakakanganiswa ndeyo kuvambwa kwevebudiriro umo nyanzvi dzechiGiriki dzokutanga dzakadai sePythagoras nevamwe vanoziva kuti vakaita kirasi yavo? Ichokwadi kuti ivhare. Asi dambudziko reEgypt rinopfuurira mberi kupfuura iyi iri nyore nhoroondo dzechiitiko.
Ijipiti yeFarao inofananidzira kubwinya kwevanhu vechiHebheru mubhaibheri, avo vakatambura varanda vanotyisa vakaponeswa uye vakatungamirirwa kunyika inopikirwa kuburikidza nevaporofita vaMwari, zvinosuruvarisa zvakare Bhaibheri rakabvunzwa. kunyange Egyptologists pamberi ichangopfuura akanga monopole kudzidza nzvimbo muEgipita, achipa kuti mwoyo yavo vaikwanisa zvokufungidzira zvemarudzi ose nedzidziso dzinobva muchikamu Bhaibheri, conjectures izvi zvaiva kunze yaiva Vanhu vechiHebheru, muranda weFarao, uyo akanga avaka mapiramidi makuru, kutsigira zvidzidzo zvavo, vakanga vasina shoko, iro izwi rinoreva mazita evaranda, shoko iro kusvikira nhasi vaisagona kuwana uye kuti yakanga isiri yekusakwanisa kuitaura. Kutaura zvazviri, chokwadi zvakasiyana, sezvo masayendisiti chero munda vakadzidza munda, vari pachisarudzo charakaita imwe nguva, the Great Pyramids uye zvimwe zvivako zvikuru nhengo zvakadaro waishandiswa Feat kuti kana taida kuti tidzore zvakafanana zvakafanana nezvinhu zvemazuva ano, tinoda zvidzidzo zvematongerwo enyika zvemazuva ano uye izvo pasina chivimbo chemigumisiro. Zviri pachena kuti zvinova zvakaoma zvikuru kuona muzvivako izvi basa revarume nevakadzi varanda, izvo zvingareva kureva kuti mahwendefa eNASA anovakwa nevaranda. Chii chingave chisina musoro kunyange nanhasi izwi revaEgyptologists vanoramba vachichinzwa.
Zvose izvi nei?
Kuburikidza nezvinhu zvakawanda zvinova pachena kuti kune ruzivo rwemashure maviri, kwete kutaura katatu, panguva apo hurumende inobhadharisa yakaita mari iyo ndiyo nzira yakakosha, kureva iyo ye ruzivo, iyo yekupedzisira iyo yakakosha kune imwe nharaunda inoda kuramba ichienderera mberi, sezvinoratidzwa nekuongorora, sarftographic systems yakagadzirwa nemarudzi akasiyana-siyana kuchengetedza nekuchengetedza ruzivo rwavo, harina kumbobvira rwasvika.
Nhasi, intaneti yakaputika miganhu yezvinyorwa iyo inonzi mazuva ano masangano ave achitsvaka kuchengetedza zvinyorwa zvake. Zvinokwanisika kuziva nzvimbo, nzvimbo, vanhu vasina kumbofamba, kana tichiziva kugadzirisa chiridzwa ichi chiri internet tinokwanisa kubvisa ruzivo rwakanaka kune iwe pachako. Nokudaro kusaziva hakusi kusarudza kusarudzo kweumwe munhu, asi chisarudzo chokuzvidira. Pane imwe nguva takarwira kukudzwa kwake, nyika yake, ikozvino iri pamusoro pezvose hondo yezveruzivo inowanzomira kune avo vasingazozvizive kugomba rakadzikadzika rehupenyu hwedu hwenyika.
Iyo nyika yakagara yakagadzirirwa iyo nyika yakave yakaderera kubva muna 2 millenniya yakakonzera kuparara kwevanhu vazhinji kwazvo, kutambura kwakawanda kwazvo kupera nhasi kune nyika isinganyanyi kutonga. Iyo inofanira kumira uye iyo iri kune mumwe nomumwe wedu kuti aite nenzira yedu pachedu, ndakatanga neBhaibheri, nokuti mumaonero angu chiKristu kubvira Murairo weMilan mu313, uyo akazivisa chitendero ichi chikuru chitendero hweRoma, akaita propelled Europe kupinda munguva nokusaziva uye kunetsana nezita, achiparadza yose nehwaro vekare zvikuru kurarama ikoko, akanga kuburikidza papa nzombe 1454 vakapiwa mvumo kuna mambo Portugal, Alfonso V, mvumo varanda Africa uye America, kukonzera rufu emamiriyoni evanhu, uye nguva dzose panguva Colonisation apo makambani European vakasarudza kutora mufambo pamwe Church kuburikidza mitemo akawanda wakadzikwa, ndipo apo vakasarudza panguva Berlin musangano kuti yakatanga muna 1885, zvingava zvakanaka kuti vaKristu kuti dzakakomberedza dzemusub -Saharan rose Africa uye kuparadza chawo yose That African nzanga kare simba 13 Emakore muuranda uye castration Arab-vaMuslim uye Western 5 Emakore ouranda pechifukidziro muKristu, chubvu yacho iri mudunhu iri nhasi, zviri gangaidzo kuti vaone kuti Black Africa haina kumbova yakaipa seyo apo nhamba yevaKristu vari muvhu rayo yasvika pane imwe nzvimbo yepamusoro.
Iyo inguvawo yekondinendi iyi kubvuma kutarisa kuchokwadi, kana mutungamiri wehurumende uye nechisimba kuEurope akaita "chipo" cheBhaibheri kune Black Black hachisi kumushumira kana kuti iye aive nechokwadi chekubatsira kwebhuku rino, kuti ave nechokwadi pamusoro paro, munhu anogona kutarisa kutaura kwaEngold II, mambo weBelgium munguva yekoloni. Uye zvingave zvakanyanyisa kuti vanhu vemaAfrica vanyepedze kuti vanzwisise zviri nani kudarika kuEurope nheyo dzebhuku rakagadzirirwa pairi nekuponda, kubata chibharo uye kuzviisa pasi pababambuya vavo.
Nenguva yakawanda inopfuura uye kunyanya zvisiri nhema pamusoro pekontinende ino zvinoratidzwa uye zvinoratidzwa, ikozvino kusvika kune iriAfrica kusarudza kana kumirira ruponeso rwebhaibheri uye nokudaro kugamuchira mitemo yemutambo wegadziriro ino zvekufananidzira, ipapo kutora hushingi hwake hwose uye kutarisa nemeso anotsvaga nhoroondo yake, kuisa guruva kubva pairi kuti ibvise maketani emaketani ayo akaiswa kunze kwerudzi rwekanguva achipa iyo kunyengera kwekugara uine mushure mukumhanya kwehupenyu.
Zvinongoreva hakusi kuda kurasa imwe yaitonga nhaka yairema kukiya pachavo vari bofu traditionalism asiwo fungazve yedu dzakaitika pakunamata chawo, mudzose arasika kushanda kwayo, kubva zvitendwa kuwana kuti Science ichi madzitateguru aikwanisa kutaura nechishuvo chisingaperi chokudhinda kusanganiswa Kwechokwadi-Justice-Order-Harmony yakasimbiswa muMâat.
Kufanana nevaAmerica vokuAmerica, panguva yekuparadzwa kwavo kwakarongedzwa neAmerican state, avo vasina kumbomira kunyevera iyo yavakadana "muchena" pane maonero ake kune zvakatipoteredza, izvo zvinyorwa izvi hazvisati zvaita sokuti zvinzwisise nhasi, Africa ine zvinhu zvakawanda zvekuyeuchidza nyika.
Anton Parks, "Eden", 2011, New World Editions Samuel Noah Kramer, "Nyaya Inotanga ku Sumer", 1993, Flammarion
Cheikh Anta Diop, "Ukubudirira kana Barbary", 2001, African Presence Assani Fassassi, "Chivi chePeah inopikisa Africa", 2004, Al Qalam
Jacques Grimault, "Zvakazarurwa zvePyramids" Nyika Itsva, "Holy Scriptures", Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi
3 nyowani kubva ku € 3,55
15 yakashandiswa kubva € 0,52
kubvira waMay 26, 2020 12:02